Noocyo tufaax ah | January 2020
Waxaa la ogyahay in midhaha geedaha tufaaxu ay u bislaadaan waqtiyo kala duwan, laga bilaabo dhammaadka Agoosto ilaa bartamaha bisha Oktoobar. Isla mar ahaantaana, farqiga u dhaxeeya miraha waxay muujinayaan labadaba dhadhankiisa iyo mudada noloshooda. Maanta, waxaan si faahfaahsan u fiirin doonaa noocyada dambe ee geedaha tufaaxa iyo sifooyinka daryeelkooda, tan iyo miro ay leeyihiin muddada kaydinta ugu dheer.
Karinta Kaabashka cas ee Kobanheegan: Qodobka guriga lagu kariyo iyo fursadaha adeegga
Ficus Robusta: daryeelka guriga
Caanaha sonkorta leh ee caadiga ah - Tamaandho leh miro madow
Sirqarinta beeritaanka guuleysta ee bouvardia guriga
Waa maxay sababta ay digaagadu ukun ugu dhejiyaan iyo waxa la sameeyo?
Amaryllis wuxuu ka soo jeedaa Afrika, sidaas darteed ma qaboobi karo jiilaalka bannaankiisa - wuu dhiman doonaa. Waxay ku kobcaan geedo qalaad oo guriga ku yaal xayawaan daaqad ama u taagan ubaxyada, hawada u furan waxay noqon doontaa mid caafimaad leh oo keliya xilliga diiran. Dhibaatooyinka joogtada ah marka kor loo qaado amaryllis, sida loo cirib tirayo Inta badan, cudurada amaryllis waxaa sababa xaalado dhir aan habboonayn. Read More
Sida loo soo qaado qaar ka mid ah rinjiyada kuleylka guriga, ama dhammaan waxyaabaha ugu muhiimsan oo xiiso leh oo ku saabsan orchidium orchids
Horumarinta Maraykanku waxay abuurtay robot for canab
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Noocyo tufaax ah 2020